नबिलले गर्यो यस्तो प्रगति, नाफा साढे ३ अर्ब माथि !
ARCHIVE, BANKING » नबिलले गर्यो यस्तो प्रगति, नाफा साढे ३ अर्ब माथि !
काठमाडौँ - नबील बैंक लिमीटेडले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ३ अर्ब ६२ करोड नाफा कमाएको छ । बैंकको खूद ब्याज आम्दानी ५ अर्ब ४५ करोड भएको छ भने बैंकले जगेडा कोषमा करिब ३ अर्ब थपेको छ । यो अवधिमा नबील बैंकले १ खर्ब १८ अर्ब निक्षेप संकलन गरेको छ भने ९१ ऋर्ब ४९ करोड कर्जा परिचालन गरेको छ।
बैंकले निस्क्रिय कर्जालाई घटाएर ०.७९ प्रतिशतमा झारेको छ भने बैंकको लागत खर्च २.०८ प्रतिशत रहेकोमा त्यो बढेर यो वर्ष २.७० प्रतिशत पुुगेको छ । यद्यपी बैंकको प्रति सेयर आम्दानी केही घटेको छ । बैंकको यो बर्षको प्रति शेयर आम्दानी ५९ रुपैयाँ ६ पैसा छ । प्रति सेयर नेटवर्थ २४७ रुपैयाँ, मूल्य आम्दानी अनुपात २५.७९ गुणा कायम भएको छ ।